I-Hypoid bevel gearmotor ithengiswa Hypoid gear motor yokukhiqiza
Hypoid bevel gearmotor ekhiqiza ngentengo ethengiswayo
I-Hypoid Gear Motors
I-Hypoid gear motor iyathengiswa
Singumkhiqizi ochwepheshe kuma-hypoid spiral bevel gear motors.
Hypoid gear motor yokukhiqiza
Umakhi wezimoto zehypoid onomsindo ophansi nokusebenza kahle okukhulu.
I-Hypoid gearbox design
I-Hypoid Gearbox evela eSogears inikeza okukugcina ekusebenzeni futhi kulayishwa ukuguquguquka kokusebenza okuhlukahlukene kwezicelo eziqhutshwa umjikelezo we-servo ephezulu.
I-Hypoid gear drive ehlinzeka
Sinezindlela zamakilasi okuqala ukusika ku-hypoid gear ukwakheka.
I-Hypoid bevel gearmotor iyathengiswa
I-engeli engakwesokudla i-Hypoid bevel gearmotor Ngokujwayelekile isetshenziswa kuzicelo zezimoto
Amagiya we-Spiral Bevel Spiral
Senza amagiya we-hypoid ngama-offsets, isitayela esijwayelekile kakhulu sesicelo sejubane eliphezulu esidinga i-torque eningi.
I-Hypoid gear isetha imishini
Ukuqaphela imiphini engenalutho egibela kwi-Hypoid gear esethwe ngama-motors kagesi
Umthengisi I-Hypoid imikhiqizo ye-bevel gear
Ama-motors gearbox we-Hypoid bevel noma ama-gear hypoid reducers, yisizukulwane esisha semikhiqizo esebenzayo ngokuzimela eyenziwe yinkampani yethu, ehlanganisa ubuchwepheshe obuphambili ezweni nakwamanye amazwe, ukusebenza kahle okuphezulu, ukonga ugesi kanye nokuvikelwa kwemvelo.
i-aluminium alloy housing kanye ne-20CrMnTi yamagiya ngaphakathi. ubunzima bendawo yamazinyo bungu-56-62HRC futhi ubukhulu besendlalelo se-carburized bugcinwa ngu-0.3-0.5mm ngemuva kokugaya kahle. 120W, 180W, 250W, 370W, 550W, 750W, 1100W, 1500W Helical-Hypoid Gear Motor, New Style Model Helical-Hypoid Elungiselelwe Izimoto, Standard Flange Input Hypoid Motor.
Ukufakwa Okujwayelekile kweFlange I-Hypoid Motor I-AC gearmotor.
I-Hypoid Transmission Gearbox minimer isetshenziswa kabanzi ku
Imboni Ceramic, Glass Imboni, Ukudla Imboni, Metallurgy Imboni, Beer & Isiphuzo Imboni, Ukuphrinta futhi ukudaya Imboni, Textile Imboni, Warehouse Logoistics Imboni, Izinkuni zokusebenza Imishini, imvelo imishini imishini Imboni, Isikhumba Imboni, Ikhemisi Imboni
Izinsizakalo zethu ze-Hypoid gear motor & gearboxes
4.1.Sinikeza izinyanga eziyi-12 iwaranti.
4.2. Sinezinkulungwane zama-gearbox anciphisa. Ukusuka Kokufaka Amandla 0.06KW kuya ku-200KW, Ratio 1.3-289.74, Ijubane lokukhipha 0-1095rpm ne-Outque torque engu-1.4-62800Nm. Zingahlangabezana nazo zonke izidingo zakho ezahlukahlukene zezimboni ezahlukahlukene.
4.3. Sinikeza ikhathalogi ye-E-noma i-Paperalog, ukuze ukhethe imodeli kalula ngokuya ngezidingo zakho
4.4.Umukelekile ukuthi uvakashele ifekthri yethu ukubheka imikhiqizo yethu, singakusiza ukuba ubhukhe nehhotela noma ithikithi.
Ngabe yini ukucutshungulwa kwama-gearbox we-Hypoid?
1. Izinto Ezinkulu
(1) Izindlu: i-aluminium alloyum alloyum (usayizi wohlaka 27 kuya ku-57)
(2) Isondo lamagiya: i-20CrMnTiH1 yokufaka ikhaboni nokuqeda ukushisa yenza ubulukhuni bamagiya ngaphezulu kube ngama-56-62 HRC, futhi kugcinwe izingqimba ze-carburization ukujiya phakathi kuka-0.3 no-0.5mm ngemuva kokugaya okuqondile.
2. Umdwebo Waphezulu
Izindlu ze-aluminium alloy:
(1) Ukuqhuma kwe-Shot kanye nokwelashwa okukhethekile kwe-antiseptic ebusweni be-aluminium alloy.
(2) Ngemuva kokuphosping, fafaza ngopende omhlophe wesiliva we-RAL9022.
Naka lapho ufaka amabhokisi wamagiya we-Hypoid:
1. Ngaphambi kokuhlanganisa imishini ye-Hypoid gear kanye nemishini yokusebenza, hlola ukuthi ngabe ukujikeleza kwe-shaft okukhiphayo kwe-Hypoid gear motor kulungile yini;
2. Ngaphambi kokuhlanganisa i-Hypoid gear motor ne-prime mover kanye namathuluzi, hlola ubukhulu bokuphambeka kukobubanzi bomgodi ngamunye, ukufakwa, ukhiye nokhiye wokugwema ukusebenza kwe-Hypoid gear motor;
3. I-Hypoid gear motor kumele ifakwe kumishini yokusebenza ukuze kugwenywe ukukhululeka nokudlidliza;
4. Gwema ukudalula i-Hypoid gear motor elangeni nasendaweni enokhahlo ngangokunokwenzeka;
5. Uma isikhathi sokugcina se-Hypoid gear motor siyizinyanga ezingama-4-6, hlola ukuthi indawo yokubopha uphawu ifakwe ngokuphelele emafutheni okugcoba. Izindebe zokuvala uphawu zamafutha zingase ziphelelwe amandla. Njengoba i-elasticity efanelekile iyisimo esidingekayo somsebenzi wokufakwa kwe-oyili, kunconywa ukufaka okunye esikhundleni se-oyili. ;
6. Zonke izingxenye zenjoloba nezimbobo ezikhipha umoya azikwazi ukuhlala ngopende;
7. Lapho shaft okuyize nomshini oqinile we-Hypoid gear motor kuxhumene ngakunye, ingxenye yokuthambisa yesigaxa kufanele ifakwe uwoyela wokuthambisa ukugwema ukubheja;
8. Izinga lamafutha kufanele lihlolwe ngesikhathi sokusetshenziswa (njengeglasi lamafutha esibuko se-oyili noma ipulaki lamafutha elivulekile, imodeli encane ayitholakali);
9. Uma usebenzisa ama-motor amasha we-Hypoid motors, ayikwazi ukuqala umthwalo ophelele, futhi akufanele ikhuphule umthwalo;
10. Lapho usebenzisa izinhlobo ezahlukene zemoto egxishwe i-Hypoid gear motors, uma isisindo semoto sikhulu kakhulu, kufanele kunikezwe amadivaysi okusekela;
11. Qinisekisa ukuthi kunendawo enhle yokufaka umoya omncane eduze kwe-motor fan ukugwema ukuthinta umphumela wokuqothuka kokushisa;
12. Amazinga okushisa emvelo asebenzayo we-Hypoid gear motor is -5 ° C kuya ku-40 ° C. Uma kungenjalo kulolu banga, sicela uxhumane nabasebenzi bethu bobuchwepheshe
Amabhokisi egiya we-Hypoid angahlukaniswa njengamabhokisi egiya we-bevel.
I-angle esebenza ngempumelelo engakwesokudla Hypoid Motor gearbox
Idizayini eyinkimbinkimbi neyamandla ngezindleko zokuncintisana.
Ububanzi bokukhethwa kokukhipha.
Ukufaka kalula futhi kusebenza kahle nge-Rated okukhipha i-torque engu-25 kuye ku-720 Nm.
Thola imininingwane yamanani ashibhile okuthengiswa kwenkampani I-Hypoid Gear motors. Thola imininingwane yokuxhumana yabathengisi, abakhiqizi, abathumela ngaphandle, abathengisi be Amagiya we-Hypoid ukuthenga e China.
Sicela uzizwe ukhululekile ukusibuza